Singapore neHong Kong inotevera kuva neApple Watch Series 3 LTE inowanikwa | Ndinobva mac
Apple inoramba ichiwedzera Apple Yekuteedzana Series 3 LTE uye ndeyekuti iwachi idzi dzinokutendera kuti ushandise zvinopfekeka zvisingasvikike kana kuwiriranisa iyo iPhone hazviwanike munyika dzese nhasi.
Chikamu chemhosva yekuwedzeredzwa uku kunogona kuve Apple pachayo nevashandisi mune yega yenyika dzavanotengesa zvigadzirwa zvavo. Mhosva isinganzwisisike ndeyeye nyika yedu yakavakidzana, France, iyo iine Apple Watch Series 3 LTE ine Orange inowanikwa uye panzvimbo payo haisi kuwanikwa pano. Iye zvino kune nyika dzine rombo rakanaka uko aya mamodheru aripo Singapore neHong Kong vachabatana navo.
Kubva musi iwoyo wekutanga kwayo munaGunyana 22, 2017, iyo Apple Watch LTE inowanikwa muUnited States, France neUnited Kingdom, iko zvino kutanga kwe kubhuka kunotevera Kukadzi 2 muSingapore neHong Kong. Iwo wekutanga odha achasvika kune vatengi vhiki imwe gare gare, zvinofungidzirwa kuti muna Kukadzi 9.
Izvi ndezvedu vazhinji vedu chimwe chinhu chakaoma kunzwisisa sezvo chaizvo iyo Apple Watch yekutenga ndeiyi, iyo Series 3 ine LTE, asi Apple inofanirwa kuenderera ichitaurirana nevashandisi kuti iwedzere kune dzimwe nyika uye zvinoita sekunge maitiro acho anononoka kupfuura isu atinoda. Muchidimbu, isu tinofanirwa kuramba takamirira uye kunyangwe chiri chokwadi kuti sarudzo yeApple Watch Series 3 isina LTE kutenga kwakanaka, ini pachezvangu ndinotenda kuti sarudzo nemukana wekugona kuzvimiririra neiyo iPhone ndiyo sarudzo mune izvi nyaya. Ichave nguva yekuramba wakamirira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Singapore neHong Kong inotevera kuva neApple Watch Series 3 LTE inowanikwa
EU inopa muripo paQualcomm yemamiriyoni 997 emadhora
Apple inowedzera basa rayo mukutyaira kwakazvimirira